Isu tinokuudza iwe muvhidhiyo kuti bhatani repamba reiyo iPhone 7 rinotaridzika sei IPhone nhau
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve nyowani bhatani reImba pane iyo iPhone 7 [vhidhiyo]
Bhatani repamba uye Taptic Injini. Vanoda kuziva vaviri vacho chimwe chezvikamu zvakakosha zveiyo iPhone kubva payakatanga muna 2007 neimwe yezvazvino ichangoburwa kune zvikamu zvaro. Saka kuda kuziva kuti, pabepa, zvakatooma kufungidzira kuti inoshanda sei izere.
Uye ndezvekuti ruzivo rwunofungidzirwa izvi rwunopfuura nyaya yekuti "hainyure" patinodzvanya. Ichi chi shanduko imwechete inoguma nekuvandudza kwakawanda, zvakawanda kupfuura zvingaratidzika pakutanga. Uye, pamusoro pezvese, isu tiri kuzozvicherekedza kubva panguva yekutanga uye mukati medu zuva nezuva.
Nyowani, hongu. Weird, zvakare.
Izvo zvine mukurumbira kuti Apple yasarudza kuisa sarudzo kuburikidza narwo matinogona kugadzirisa mwero wekupenga mhinduro yatinoda kugamuchira kubva kune diki mota iyi nemuchina wega wega. Izvi zvinoreva kuti Apple inofungidzira kuti haazi munhu wese anofanirwa kugutsikana neyakaenzana mhinduro yaanopa. Ichokwadi ndechekuti isu tichajairira kune chero eanoverengeka marongero atinokurudzirwa pasina matambudziko, asi hazvimborwadzise kugona kusarudza kuti ndechipi zvacho chinokodzera kuravira kwedu.
Chimwe chezvikamu zvakakosha zvebhatani hachisisina zvikamu zvepanyama zvekare, pamusoro pekudzivirira kuparara kunogona kuitika, ndizvozvo inogonesa iyo IP67 chitupa icho iyo iPhone 7 inopesana neguruva, jecha nemvura. Nenzira iyi, tinogona kunyudza mudziyo tisina kunetseka nezve zvinogona kuitika. Ehe, isu tinorangarira kuti iyo Apple warandi haina kufukidza kukuvara kwemvura.
Izvo zvakare zvichavandudza zvishoma nzira yedu yekuwana multitasking nekudzvanya bhatani rekutanga kaviri, kuve ikozvino nekukurumidza kupfuura mune apfuura mamodheru. Nekusafanirwa kuita chero nzira, zviri nyore kuita iyo "mbiri tinya" iyo inovhura multitasking kufambisa kusvika pamwero wakakura shanduko pakati pezvishandiso munzira yakanyorovera. Sezvazvakaita muchizvarwa chakapfuura, 3D Kubata kunotibvumidza kuti tiwane iko nekudzvanya kumucheto wekuruboshwe kwechidzitiro, asi nzira iyi inononoka zvishoma kupfuura kana tikashandisa bhatani rekutanga.
Hatizivi kana iri richava danho rekupedzisira ratinoona pamberi pekutsakatika kwebhatani reKumba sekuziva kwedu, asi izvo zvatinogona kutaura ndezvekuti isu tinoda iyi ongororo yacho iyo inosanganisira iyo iPhone 7.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Zvese zvaunoda kuti uzive nezve nyowani bhatani reImba pane iyo iPhone 7 [vhidhiyo]
ImgPlay - GIF Mugadziri ane Mapikicha uye Mavhidhiyo Mahara kune Yakatemwa Nguva
Google Mifananidzo inogadziridza nekugadzira maGIF kubva kumavhidhiyo otomatiki